Posted by သက်ဝေ at 11:58 PM
Anonymous November 21, 2010 at 11:53 PM
နံပါတ် ၁၇ ကို ဦးဆုံး လာရွေးပါတယ်ချင့်။
ဟိဟိ .. စာမကျက်ဘဲ ဘလော့လည်တာ မိပြီ .. တိန် :P
Kay November 21, 2010 at 11:57 PM
ဖဘ ပေါ် မှာ လိုက်ေ၇ွး...း)
mirror November 21, 2010 at 11:57 PM
No 27 ကို ပြန်ရွေးပါရစေဗျို့... ပျော်စရာကြီး။း))
Moe Cho Thinn November 22, 2010 at 12:04 AM
ချိုသင်း ကံ့ကော်ပန်းလေး ပြန်ပေးပါ မမ။
ပန်းက နှစ်ပွင့်မို့ တပွင့် ယူချင် ယူပါလေ..
(အော်..ငါ့နှယ်၊ အလစ်သုတ်တဲ့သူကို ပြန်ဝေစုခွဲနေသေးး)
ရွှန်းမီ November 22, 2010 at 12:05 AM
:D .. happy idea..
thanks for the night, dear sis!
Anonymous November 22, 2010 at 12:11 AM
28 ရွေးချင်လို့ပါ မမသက်ဝေ..
khin oo may November 22, 2010 at 12:13 AM
nu-san November 22, 2010 at 12:15 AM
မမသက်ဝေက စိတ်ကူးကောင်းတယ်.. ပျော်စရာကြီး.. :D အချိန်ပေးပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကို ယူလာခဲ့တာပဲ..တကယ်တော်တဲ့ အမ... :))
မီးမီးရဲ့ လိပ်ပြာလေးတွေ (နံပါတ် ၁၁) ကို မအိပ်ခင် အမြန် ပြန်လာရွေးပါတယ်.. :))
PAUK November 22, 2010 at 12:18 AM
khin oo may November 22, 2010 at 12:19 AM
နှင်းနဲ့မာယာ November 22, 2010 at 12:38 AM
မောင်မျိုး November 22, 2010 at 12:39 AM
ပုံ 10 နဲ့ 11 က လှလိုက်တာ ဘယ်သူ့ဟာလဲမသိ အစ်မ တော်တယ်ကော လှလှလေးတွေ ရွေးခိုးတတ်တယ်း)
mae November 22, 2010 at 1:10 AM
T T Sweet November 22, 2010 at 1:34 AM
ကြံကြံဖန်ဖန်တော် ... ဘလော့ရွာမှာပါ ကျီးမနိူးပွဲလုပ်ရတယ်လို့ ...ကြားကြားဖူးပေါင်တော် ...
ကျုပ် နံပတ် ၁၂လေး ပြန်ပေးကြပါတော် ...
(ပြောင်းဖူးဖက် ဆေးလိပ်ကြီး မီးခိုးတထောင်းထောင်းနဲ့ ဖွာနေတဲ့ အဒေါ်ကြီးပုံမြင်ယောင်ပါရန် ...)
(တော်တော် အကြံပိုင်တဲ့ အန်တီသက်ဝေ ... အလေးပြုသွားပါသည်။)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 22, 2010 at 2:01 AM
ပျော်စရာပဲ မသက်ဝေ ၊မြေလတ်မှာလည်း လုပ်ကြတယ်။
အိမ်က ထမိန်လျှော်တဲ့ အင်တုံကြီး မသွားလို့ စိတ်ပျက်တာဆိုတာလေ ပြောချင်ပါဘူး။
ပြီးတော့ အဲ့ဒီအင်တုံကို နတ်အင်မတန်ယုံတဲ့ အန်တီဆရာမ အ်မ်ခေါင်းရင်း သွားချထားတာ အဲ့ဒီ အန်တီက စိတ်ဆိုးတာ ပြောပါနဲ့တော့ ။
မယ်ကိုး November 22, 2010 at 7:00 AM
ပျော်စရာကြီး မမ ... မယ့်ပုံလေးလည်း ပါတယ် :D
23 ဘက်ခမ်းရဲ့ နံပါတ်လေး :P
မေငြိမ်း November 22, 2010 at 7:11 AM
ဟဲဟဲ.. နံပါတ် ၅.. တဲ့။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျ.. ၅ ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဗျ.. သိလား..။
ဒါပေမဲ့ ကိတ်ချ မရှိပါဘူး။
ပြန်မရွေးဘဲ ပေးလိုက်ဆိုလည်း ပေးပါတယ်ဗျာ.. ကိုယ့်ညီမလေးပဲဟာ..။ :)
ညီမလေး November 22, 2010 at 7:13 AM
သူများက နောက်အကျဆုံးဖြစ်နေပါလားး ( ပြူးတူးပြဲတဲဖြင့် ချယ်ရီပန်းလေး ပြန်ယူသွားသည်း)))
ပျော်စရာ ချစ်စရာ အိုက်ဒီယာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မမသက်ဝေး))
blueskyforest November 22, 2010 at 8:46 AM
နောက်ဆုံးမှ အခိုးခံရသူပါ။း)
ငယ်ငယ်က တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ သူများခြံထဲဝင်ပြီး သင်္ဘောသီးတွေခိုးခဲ့လို့ အခု ၀တ်ပြန်လည်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီညက သူငယ်ချင်းတသိုက် ခိုးရာပါပစ္စည်းတွေနဲ့ ထမင်းချက်စားကြတာ ပျော်စရာကြီး။ ဒို့ခိုးခဲ့တဲ့ သင်္ဘောသီးတွေကို သုတ်စားပစ်ကြတယ်။ ခိုးစားရတဲ့ အရသာ ကောင်းမှကောင်း။ သက်ဝေ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အောင်မြင်စွာ ခိုးနိုင်ပါစေဗျား။ ကျန်းမာပါစေ။
myo November 22, 2010 at 9:33 AM
၂၈က တခါလေး ငါးဖယ်ထောင်းပါတယ် နံမည်ကျော်သွားတာပဲ.. :P
နံပါတ်၂၉ အလုံးကြီးထဲမှာ ပန်းကန်ဇောက်ထိုးနဲ့ပုံကတော့ လာရွေးမှာမဟုတ်တော့ဘူး အခုအချိန်မှာ ယူချင်တာသာယူ ဘာမှအရေးမကြီးတော့ပါဘူးတဲ့
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ November 22, 2010 at 9:39 AM
မမသက်ဝေ အိုင်ဒီယာလေးကောင်းလိုက်တာ ပျော်စရာကြီး.... :D :D
ငယ်ငယ်ကတော့ သူများတွေ ဒီလိုကြီးမနိုးပွဲလုပ်တာကို ထိုင်ရီဖူးတယ်... ကိုယ်ခြံထဲက ပန်းအိုးတွေတော့ သေချာ ထုံးနဲ့ မှတ်ထားရသေးတယ်.. ကျီးမနိုးပွဲနဲ့ ရောချသွားမှာဆိုးလို့လေ... တနှစ်ခံရဖူးတယ်... အိမ်က သန်လျက်ဂမုန်းအိုးကြီးပါသွားတယ်... :)
SHWE ZIN U November 22, 2010 at 9:58 AM
ရွေးစရာ မပါလို့ ထိုင်ရီပြီးပြန်သွားပြီနော် အိုင်ဒီယာ လေး ကကောင်းလိုက်တာ ပျော်စရာကြီး
ဆောင်း November 22, 2010 at 10:22 AM
ကျမကတော့ မရွှေစင်ရဲ့ မဲဇလီဖူးနဲ့ ပုရစ်ကြော် အလစ်သုတ်သွားပြီးပီ
ThuHninSee November 22, 2010 at 10:28 AM
;) နှင်းဆီပန်းလေးကို ခနအပ်ထားမယ်နော်။
နှင်းတွေကျနေလို့ အခုနေပြန်ယူရင် သေသွားမှာစိုးလို့။
မိုးငွေ့...... November 22, 2010 at 10:29 AM
ဟယ် ပျော်စရာပွဲလေးနော် မမသက်ဝေ အိုင်ဒီယာကောင်းလိုက် ဘာပစ္စည်းမှမရှိဘဲ လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့ ပြန်သွားရတဲ့ အိမ်ထဲမှာ ညီမလေးအိမ်ပါမယ်ထင်တယ်...း)
ကိုပေါ November 22, 2010 at 10:35 AM
အဲဒီပုံက ကျနော်လည်း အင်တာနက်က သူများပစ္စည်းကို (ကျီးမနိုးပွဲ မဟုတ်ဘဲ)အလစ်သုတ်ထားတာ။း-)
ချစ်ကြည်အေး November 22, 2010 at 11:16 AM
ဟင်....ငြိမ်နေပါတယ်မှတ်တာ သူက အလုပ်သစ် အလစ်သုတ်နေတာကိုး၊ ဟားဟား သက်ဝေ လူဇိုး....
ဒါထက် ၁၀ ဂဏန်းက ဘူကျတယ်၊ မကြိုက်ဘူး ပြန်လဲပေး...၊ အဲ ဘူကြီးကစားရင်တော့ တပွဲလုံး သိမ်းပြီပဲ ငှဲငှဲ....:)
စုချစ် November 22, 2010 at 12:06 PM
ဟယ်တော့ ... တိုက်ဆိုင်ပုံများ.. တူးတူးကိုတောင် သတိရသွားဘီ... ခစ်ခစ်ခစ်...
မိဆိုး... အဆိုးလေးမို့ကွယ်... ပိုချစ်တယ်.....
Hmoo November 22, 2010 at 2:27 PM
Anonymous November 22, 2010 at 2:46 PM
သူများက နောက်အကျဆုံးဖြစ်နေပါလားး :)))
Plz return back. Hee hee...
this post is nice one.
Vista November 22, 2010 at 3:42 PM
၂၆ လေး လာပြန်ရွေးတာပါ .. ဟိဟိ
သူများနေမကောင်းလို့ အိပ်နေဒါကို .. လစ်သွားဒယ်
ဇွန်မိုးစက် November 22, 2010 at 4:56 PM
suchagood idea! love it. :)
TZA November 22, 2010 at 6:50 PM
တားတားဟာက နှချပ်ကိုးပါ၊ ထုပြန်ပေး.. ထုပြန်ပေး..
အပြုံးပန်း November 22, 2010 at 8:28 PM
အိုင်ဒီယာလေး ကောင်းလိုက်တာ မသက်ဝေ၊
ကလူသစ် November 22, 2010 at 8:56 PM
သူခိုးလက်က သူဝှက်ပြန်လုသွားတယ်။ အကျင့်ပါနေလို့ :)
pandora November 22, 2010 at 9:56 PM
( အခုလည်း ကျီးမနိုးပွဲကို ဘလောဂ့်တွေထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ ဆိုပြီး တွေးကြည့် နေမိသေးတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ပြောင်းချိတ်ကြသလို ဘန်နာတွေ ပြောင်းချိတ်လို့ရရင် ရယ်ရမယ်။ တံခါးဝမှာ ကန့်လန့်ခံ ထားသလို ဆီပုံးတွေကို သွားဆို့လိုက်ရမလား။ အချစ်ကဗျာ နုနုရွရွရေးတဲ့ ဘလောဂ့်မှာ တရားစာရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်က သံဝေဂပို့စ်ကို ဖြုတ်ခိုးပြီး သွားတင်လိုက်တာတို့ ဘာတို့။ ဒီလို လိုက်မွှေလို့ရရင် ဘယ်လိုနေမလဲပေ့ါ။ ကျီစားသန်က ရန်များ၏ တော့ မဖြစ်အောင် သတိထားရမယ်။ http://pandora-and-pandora.blogspot.com/2008/11/blog-post_13.html )
၂၀၀၈ ခုနှစ်က အဲလိုဆန်ဆန် စိတ်ကူးကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ အခုတော့ ဒေါ်သက်ဝေက အကောင်အထည်ဖော်သွားပြီကိုး။ ညက အစောကြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ အိပ်မွေ့ချထားတာဖြစ်မယ်။ ~@~
ဘန်နာ ၈ ကို ပြန်လာယူသွားပါပြီ။း)
အိန္ဒြာ November 22, 2010 at 11:00 PM
face book အ၀င်ဦးလို့
ဘန်နာတော်စောင့်လေးဘာလေး ထားဖို့တောင် စိတ်ကူးနေတာ.....း))
ဘာ နဲ့ ရွေး ရ မှာ လဲ ဟမ်....
ကျီးမနိုးပွဲက ပစ္စည်းတွေကို ဒုလ္လဘ၀တ်ဖို့ သင်္ကန်းတွေနဲ့ ရွေးရတာ...
အိန္ဒြာလည်း ကုသိုလ်ရအောင် မယ်သီလရှင်ဝတ်ရုံ တစ်စုံနဲ့ ရွေးသွားပါတယ်နော်..
( သဘောတူသူများ လက်ခုပ်တီးကြပါ..အဲ..သာဓုခေါ်ကြပါ )
အိန္ဒြာ November 22, 2010 at 11:05 PM
သက်ဝေ November 22, 2010 at 11:08 PM
ပျော်စရာ ကျီးမနိုးပွဲကို အတူတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... လာရွေးယူရင်း ချန်ခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်တွေကလဲ တကယ် ပျော်စရာပါ...။ အခုလို ရယ်ကြရ ပျော်ကြရတယ် ဆိုလို့ သိပ်ဝမ်းသာပါတယ်...။
တကယ်တော့ အလစ်သုတ်ရတာ သိပ်မလွယ်လှဘူး။ စနေနေ့ညကဆို တညလုံး မအိပ်မနေ တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် လိုက်အလစ်သုတ်နေရတာ... ဒါတောင် တချို့အိမ်တွေ ကျန်ခဲ့သေးတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို ပျော်စရာဖြစ်သွားတော့ အိပ်ရေးပျက်ခံရကျိုး နပ်သွားတာပေါ့... ကျန်ခဲ့တဲ့ အိမ်တွေ နောက်နှစ်မှ လာတော့မယ်...။
T T Sweet November 22, 2010 at 11:35 PM
အဲဒါ ကြိတ်ကြံနေတော့ ငြိမ်နေတာပဲ ... တံခါးလာခေါက်တာကို အသံမပြုတာ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲလို့ ထင်သား ...
ခဏခဏ လာလာကြည့်နေတာ ... ပစ္စည်းတွေ လာရွေးကုန်ကြပြီလားလို့ ...
Heartmuseum November 23, 2010 at 5:51 AM
အမ..... Idea လေး သိတ်ကောင်းတယ်....
မယ်ကိုး November 23, 2010 at 11:04 PM
မယ်လည်း ဘယ်သူတွေ ရွေးပြီးပြီလဲလို့ ခဏခဏလာလာကြည့်တယ် မမး)
Anonymous November 25, 2010 at 12:44 AM
ဘုရားတွေ နံပါတ် ၁၈ က ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်သမျှ အကုန်ပဲကိုး။ ဘယ်အချိန်ပါသွားမှန်းတောင် မသိဘူး။ မယ်ဇလီဖူးသုပ်နဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရာဆွေးနွေးနေတုန်း အလစ်သုတ်ခံရတာကိုးကွယ်... ရှိစေတော့ မရွေးတော့ဘူးနော်...:P အသစ်ပဲ ပြန်ဝယ်ထားလိုက်တော့မယ် စိတ်ကူးတယ်...။( ဟဲဟဲ ဘယ်ရမတုန်းးး သာခိုးး စိတ်ညစ်သွားပြီး အိမ်တိုင်ယာရောက် ပြန်ပို့ချင်သွားပြီ။)
P.Ti November 25, 2010 at 6:27 PM
အမ ကိုယ့်ဘလော့တောင် မရောက်ဖြစ်လို့ ယူသွားတာ မသိလိုက်ဘူး.. ဟိဟိ...
ပေး ပေး ပေး ဘန်နာလေးပြန်ပေး... :P
ThuHninSee November 25, 2010 at 6:30 PM
နံပါတ်၁၅က လာရွေးပါ့မလား။ အခု..
မြသွေးနီ November 11, 2011 at 2:04 PM
အားလုံးပျော်ရသလို ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး အစ်မသက်ဝေကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်ရွှင်နေခဲ့မှာ မြင်ယောင်မိတယ်။